Shiinaha Alxanka Robot warshad taxane iyo shirkado cusub | Daya
Alxanka taxane robot JZJ06C-180
Alxanka taxane robot JZJ06C-144
Alxanka taxane robot JZJ06C-160
Alxanka taxane robot JZJ06C-200
Robotka alxanka waa aalado warshadeed oo ku hawlan alxanka (oo ay ku jiraan goynta iyo buufinta). Marka loo eego qeexida ururka caalamiga ah ee Istaandarada (ISO) in aaladaha warshadaha ay iska leeyihiin robot-ka alxanka caadiga ah, aaladaha warshadaha waa ujeedo badan, dib-u-habayn barnaamij-wax-ku-ool ah oo leh saddex ama in ka badan faasas la bar-tilmaameedsado, kaas oo loo adeegsado aaladda otomatiga warshadaha. Si loola qabsado codsiyada kala duwan, isdhexgalka farsamaysan ee dhidibka ugu dambeeya ee robotka ayaa badanaa ah isku xirka flange, kaas oo ku xirnaan kara aalado kala duwan ama dhamaadka waxtarka. Robotka alxanka ayaa lagu rakibayaa alwaaxyada alxanka ama alxanka (jarista) qori on dhamaadka usheeda dhexe ee robot warshadaha, si ay u samayn karto alxanka, goynta ama ku buufin kuleylka.
Alxanka Robot waa adeegsiga qalab farsameysan oo loo yaqaan (robot), kaas oo gebi ahaanba otomaatig ka dhigaya habka alxamida iyadoo la adeegsanayo alxanka iyo maareynta qeybta. Nidaamyada sida alxanka aaladda biraha gaaska, inta badanna otomaatig ahaan, qasab maahan inay u dhigmaan alxanka robot, maaddaama hawl wadeen bini'aadam ah uu mararka qaarkood diyaariyo qalabka la alxaminayo. Alxanka Robot waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa alxanka booska iska caabin iyo alxanka arc ee codsiyada wax soo saarka sare, sida warshadaha baabuurta.
Alxanka Robot waa codsi cusub oo ku saabsan aaladaha, in kasta oo aaladaha rootooyinka markii ugu horreysay lagu soo kordhiyay warshadaha Mareykanka intii lagu jiray 1960-yadii. Isticmaalka aaladaha aaladaha alxanka ma aysan qaadin illaa 1980-meeyadii, markii warshadaha baabuurta ay billaabeen inay aalado badan u adeegsadaan alxanka barta. Tan iyo markaas, tirada aaladaha loo adeegsado warshadaha iyo tirada codsiyadooda labaduba si aad ah ayey u kortay. Sannadkii 2005, in ka badan 120,000 oo aalado ayaa loo adeegsaday warshadaha Waqooyiga Ameerika, ku dhowaad kala badh ayaa loo isticmaalay alxanka.  Kobaca wuxuu ugu horrayn ku xaddidan yahay kharashyada qalabka sarreeya, iyo xaddidaadda ka dhalanaysa codsiyada wax soo saarka sare.
Alxanka aaladda 'Robot arc alx wuxuu bilaabay inuu si dhakhso leh u kobco dhowaan, mar horena wuxuu amar ku bixiyaa 20% codsiyada aaladaha warshadaha. Qaybaha ugu waaweyn ee aaladaha alxanka qaansoleyda waa maareynta ama qeybta farsamada iyo koontaroolaha, oo u shaqeeya sida "maskaxda" robotka. Qalabaynta ayaa ah waxa ka dhigaya robotku inuu dhaqaaqo, iyo qaabeynta nidaamyadan waxaa loo kala saari karaa dhowr nooc oo caam ah, sida SCARA iyo robot isuduwaha robotka, kuwaas oo adeegsada nidaamyo iskudubarid kala duwan oo lagu hagayo hubka mashiinka.
Alxanka Robot Taxanaha Halbeegyada Farsamada
Hore: Lix taxane Robot Taxanaha
Xiga: Shaabbinta Dhimashada